Health Archives - Page 47 of 47 - Shwe Khit
May 20, 2020 by Zaw Hein
လူသိနညျးတဲ့ မနျကညျြးသီးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြား
အညာမှာတော့ မနျကညျြးပငျတှအေမြားကွီးရှိသလို မနျကညျြးသီးလညျး ပေါမှပေါပါပဲ။ မနျကညျြးသီးက ဈေးမကွီးပမေယျ့ သူ့မှာ အကြိုးအာနိသငျတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။မနျကညျြးသီးက မကျြလုံးအမွငျကို အားကောငျးစပွေီး အသကျရှူလမျးကွောငျးကနျြးမာရေးကို မွှငျ့တငျပေးပါတယျ။အဲ့ဒီအပွငျ အသားအရကေို လှပစကော အစာခွစေနဈကို အားကောငျးစပေါတယျ။မနျကညျြးသီးက ကိုယျခံအားစနဈကို မွှငျ့တငျပေးပွီး ကိုလကျစထရောဓာတျကို ကစြပေါတယျ။ နှလုံးကနျြးမာရေးကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျသလို ကငျဆာရောဂါတှကေိုလညျး ကာကှယျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
မနျကညျြးသီးရဲ့ အာဟာရမြား – မနျကညျြးသီးမှာ ဗီတာမငျ စီ၊ E ၊ B ၊ ကယျဆီယမျ၊သံဓာတျ၊ Phosphorus ၊ ပိုတကျဆီယမျ၊ Manganese နဲ့ အမြှငျဓာတျတှပေါဝငျပါတယျ။အဲ့ဒီအပွငျ မနျကညျြးသီးမှာ စှမျးအားမွငျ့ Antioxidants ဓာတျတှအေမြားကွီးပါဝငျတာကွောငျ့ ကငျဆာရောဂါကို ကာကှယျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
အစာခွစေနဈကို မွှငျ့တငျပေး – မနျကညျြးသီးမှာ သဘာဝ Laxative ဓာတျပါဝငျတဲ့အပွငျ အမြှငျဓာတျပါဝငျတာကွောငျ့ အစာခွစေနဈကို အားကောငျးစပေါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ ဝမျးခြုပျနရေငျ မနျကညျြးသီးစားတာတို့ မနျကညျြးဖြျောရညျသောကျကွတာပါ။အဲ့ဒီအပွငျ အစာတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျ ခွဖေကျြပေးနိုငျပါတယျ။ အစာခွအေရညျတှကေို ပိုထှကျစပွေီး မွနျမွနျဆနျဆနျ ခွဖေကျြပေးနိုငျပါတယျ။
နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးမှနျ – လလေ့ာမှုမြားအရ မနျကညျြးသီးမှာ သှေးတိုးနဲ့ကိုလကျစထရောကို ကဆြငျးစပေါတယျ။ မနျကညျြးသီးမှာ ပါဝငျတဲ့အမြှငျဓာတျတှကေ မကောငျးတဲ့ကိုလကျစထရော ကို ကဆြငျးစပေါတယျ။ အဲ့ဒီအပွငျ ပါဝငျတဲ့ ပိုတကျဆီယမျဓာတျက သှေးတိုးကိုကစြပေါတယျ။အဲ့ဒီအပွငျ ဗီတာမငျ C လညျးပါဝငျတာကွောငျ့ ဗီတာမငျ C က Free Radicals တှရေဲ့သကျရောကျမှုကို ကဆြငျးစပေါတယျ။ Free Radicals တှကွေောငျ့ နှလုံးရောဂါနဲ့တခွားရောဂါတှဖွေဈပှားရတာပါ။
သှေးလညျပတျမှုကို အားကောငျးစေ – မနျကညျြးသီးမှာ သံဓာတျပါဝငျမှုမြားပွီး မနျကညျြးသီး ၁ခုမှာတောငျ နစေ့ဉျလိုအပျတဲ့ သံဓာတျ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။သံဓာတျခြို့တဲ့ရငျ အားနညျးတာ၊ ခေါငျးကိုကျတာ၊ အစာအိမျပွဿနာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက အမြိုးသမီးတျောတျောမြားမြားမှာ သံဓာတျခြို့တဲ့ လက်ခဏာတှရှေိတယျလို့UNICEF က ထုတျပွနျဖူးတာကွောငျ့ ဒီလို သံဓာတျခြို့တဲ့တယျလို့ သံသယရှိရငျ မနျကညျြးသီးစားပေးနိုငျပါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျ ကဆြငျး – မနျကညျြးသီးမှာ Hydroxycitric Acid (HCA) ပါဝငျတာကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးစပေါတယျ။ ဒီကှနျပေါငျးက ခန်ဓာကိုယျထဲက အဆီသိုလှောငျပေးတဲ့ အနျဇိုငျးတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
ဆီးခြို – မနျကညျြးသီးက ကာဗိုဟိုကျဒရိတျတှေ သိုလှောငျပေးတဲ့ Alpha-Amylase အငျဇိုငျးကို နှေးအောငျလုပျဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။ ကာဗိုကျဟိုကျဒရိတျမြားတဲ့ အစားအစာတှကေ သှေးအတှငျး အခြိုဓာတျနဲ့အငျဆူလငျ တှကေို မွငျ့တကျစပွေီး ဒါက ဆီးခြိုရောဂါ ရှငျတှအေတှကျ ကွီးမားတဲ့ ပွဿနာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ မနျကညျြးသီးစားခွငျးက ဆီးခြိုအတှကျကောငျးပါတယျ။
ကိုယျခံအားကို မွှငျ့တငျပေး – ဗီတာမငျစီ ပါဝငျမှုမွငျ့မားတာကွောငျ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ၊ မှိုတှဝေငျရောကျမှုကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျခံအားကိုမွှငျ့တငျပေးနိုငျပွီး ရရှေညျကနျြးမာရေးကောငျးစဖေို့ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
လူသိနည်းတဲ့ မန်ကျည်းသီးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
အညာမှာတော့ မန်ကျည်းပင်တွေအများကြီးရှိသလို မန်ကျည်းသီးလည်း ပေါမှပေါပါပဲ။ မန်ကျည်းသီးက ဈေးမကြီးပေမယ့် သူ့မှာ အကျိုးအာနိသင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။မန်ကျည်းသီးက မျက်လုံးအမြင်ကို အားကောင်းစေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် အသားအရေကို လှပစေကာ အစာခြေစနစ်ကို အားကောင်းစေပါတယ်။မန်ကျည်းသီးက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကိုလက်စထရောဓာတ်ကို ကျစေပါတယ်။ နှလုံးကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သလို ကင်ဆာရောဂါတွေကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးရဲ့ အာဟာရများ – မန်ကျည်းသီးမှာ ဗီတာမင် စီ၊ E ၊ B ၊ ကယ်ဆီယမ်၊သံဓာတ်၊ Phosphorus ၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ Manganese နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် မန်ကျည်းသီးမှာ စွမ်းအားမြင့် Antioxidants ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်တာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
အစာခြေစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေး – မန်ကျည်းသီးမှာ သဘာဝ Laxative ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အပြင် အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို အားကောင်းစေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ၀မ်းချုပ်နေရင် မန်ကျည်းသီးစားတာတို့ မန်ကျည်းဖျော်ရည်သောက်ကြတာပါ။အဲ့ဒီအပြင် အစာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ခြေဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာခြေအရည်တွေကို ပိုထွက်စေပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ခြေဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန် – လေ့လာမှုများအရ မန်ကျည်းသီးမှာ သွေးတိုးနဲ့ကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးမှာ ပါဝင်တဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေက မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ပါဝင်တဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်က သွေးတိုးကိုကျစေပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် ဗီတာမင် C လည်းပါဝင်တာကြောင့် ဗီတာမင် C က Free Radicals တွေရဲ့သက်ရောက်မှုကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ Free Radicals တွေကြောင့် နှလုံးရောဂါနဲ့တခြားရောဂါတွေဖြစ်ပွားရတာပါ။
သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေ – မန်ကျည်းသီးမှာ သံဓာတ်ပါဝင်မှုများပြီး မန်ကျည်းသီး ၁ခုမှာတောင် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ သံဓာတ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။သံဓာတ်ချို့တဲ့ရင် အားနည်းတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အစာအိမ်ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတော်တော်များများမှာ သံဓာတ်ချို့တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့UNICEF က ထုတ်ပြန်ဖူးတာကြောင့် ဒီလို သံဓာတ်ချို့တဲ့တယ်လို့ သံသယရှိရင် မန်ကျည်းသီးစားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်း – မန်ကျည်းသီးမှာ Hydroxycitric Acid (HCA) ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒီကွန်ပေါင်းက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီသိုလှောင်ပေးတဲ့ အန်ဇိုင်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချို – မန်ကျည်းသီးက ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေ သိုလှောင်ပေးတဲ့ Alpha-Amylase အင်ဇိုင်းကို နှေးအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကာဗိုက်ဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့ အစားအစာတွေက သွေးအတွင်း အချိုဓာတ်နဲ့အင်ဆူလင် တွေကို မြင့်တက်စေပြီး ဒါက ဆီးချိုရောဂါ ရှင်တွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဒါ့ကြောင့် မန်ကျည်းသီးစားခြင်းက ဆီးချိုအတွက်ကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေး – ဗီတာမင်စီ ပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုတွေဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ရေရှည်ကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
May 19, 2020 by Zaw Hein
အသညျးအဆီဖုံးခွငျးသညျ ဆယျစုနှဈအတှငျး အဖွဈမြားသော ရောဂါဖွဈ၏ .
ယခငျ အသညျးရောဂါမှာ အသားဝါ ရိုးရိုးသာ ဖွဈပွီး ဖွဈပွီး – ပထမ မကျြစိဝါ နောကျဆုံး ဆီးဝါပွီး တိုငျးရငျးဆေး အမှတျ ( ၁ ) မကျလငျခဉျြဆေး …
( ရှေးဆေးကမျြးမြားမှ သမှေပုတိက သလိပျပုပျနိုငျဆေးနညျးကို ယူထားသောဆေး )ဖွဈပွီး အဓိကမှာ ( မကျလငျသီး – မကျလငျခေါကျ ) တို့ဖွဈသညျ။
မကျလငျသီးသညျ အလှနျခဉျြပွီး ဟငျးခကျြရာတှငျ ထညျ့သှငျး အသုံးပွုကွသညျ့ တောဓလေ့ သုံး အသီးဖွဈသညျ။
မကျလငျသီး. မကျလငျခေါကျတို့သညျ အသညျးအတှကျအလှနျကောငျးပွီး အသညျးရောငျခွငျး. အသားဝါခွငျး. ဆီးဝါခွငျး တို့ကို အလြှငျအမွနျကောငျးစကွေောငျး သိရပါသညျ။
၁၉၉၅ နောကျပိုငျးမှသာ ပိုးကွောငျ့ ဖွဈသော အသညျးရောဂါ. အသညျးခွောကျ အသညျးအဆီဖုံး ရောဂါမြား အဖွဈမြားလာပွီး သဆေုံးသူမြားပွားလာ၏ ။
အောကျဖျောပွပါ ဆေးဖကျဝငျ အပငျမြားသညျ –
၁ – တဈနတေ့ခွား ဝဖွိုးလာသူ
၂ – အရကျ – ဘီယာ သောကျသုံးလှနျးသူ
၃ – ခန်ဓာကိုယျတှငျး အဆီ ဓာတျမြားသူ
၄ – အထိုငျမြားသူ
၅ – လမျးလြှောကျနညျးသူ
၆ – ဇိမျယဇျလှနျးသော သူမြားအတှကျ – အသညျးအဆီဖုံးရောဂါ – အသညျးခွောကျရောဂါမြား မဖွဈစရေနျ ကာကှယျပေးနိုငျသော သဘာဝ အပငျမြား ဖွဈပါ၍ လိုအပျပါက တဈမြိုးမြိုးကို အသုံးပွုကွညျ့နိုငျပါသညျ။
ထိုအပငျအား ထမငျး လကျတဈဆုပျခနျ့ဖွငျ့ မွစေဉျ့အိုးတှငျ ၃ ရကျခနျ့ အခဉျြတညျပွီးဟငျးဂလာခဉျြဖတျအဖွဈ ငါးနဲ့ ခကျြစားခွငျး ငါးပိရညျနဲ့ တှဲဖကျ စားသုံးပါက အရကျနာကခြွငျး , အသညျးခွောကျခွငျး , အသညျးအဆီဖုံးခွငျးမြား မဖွဈစပေါ။
၎င်းငျး ဟငျးဂလာပငျကို ပွုတျသောကျပါက ဆီးအတှကျ အလှနျကောငျး၏ ကြှဲ. နှားမြား.ဆီးခြုပျသောအခါ ထိုအပငျကို ခုတျစငျး၍ နှားစာတှငျ. ရောကြှေးရသညျ။
( ဆောငျးပါးရှငျ၏ အဖိုး တဈဝမျးကှဲတျောသူသညျ ညနခေငျးတိုငျး ခကျြအရကျဟုချေါသော အရကျဖွူကို ပုံမှနျ သောကျပွီး ဟငျးဂလာခဉျြကို အမွီးအဖွဈ နစေ့ဉျ စားသုံးခဲ့ အသကျ ၉၉ နှဈကြျော ၁၀၀ အတှငျးရောကျမှ ကှယျလှနျသညျဟု သိရပါသညျ။
တောဓလတှေ့ငျ ခကျြအရကျသောကျပွီး အရကျနာ မကစြရေနျ ဟငျးဂလာခဉျြဖတျကို ပဲကွီးလှျောနှငျ့ စားသုံးလရှေိ့ကွောငျး သိရပါသညျ။
အရှကျသေး၏ အရှကျနဲ့အရိုးတှငျ အမှေးနုလေးမြားပါပွီး ရိုးတံ အနီနဲ့ အဖွူရောငျ ၂ မြိုးရှိပွီး ဆေးဖကျဝငျသညျ။ ထိုအပငျကို နှယျလိုကျနူတျယူ နရေိပျတှငျလှနျး အပငျခွောကျသှသှေ့ားပါက သံဘူး သို့မဟုတျ ဖနျပုလငျးတှငျ ထညျ့ပါ။
နစေ့ဉျ မတျခှကျ တဈခှကျစာ လကျဖကျခွောကျ ခပျသောကျသလို ခပျသောကျပေးပါက အသညျး အဆီဖုံးခွငျးကို ကဆြငျးစနေိုငျပွီး ဆီးကောငျး ဆီးရှငျစကော မကျြလုံးအား ကောငျးစသေညျ။
မွနျမာ့ဆေးကမျြးမြားစှာ၌ ပါဝငျပွီး အနောကျတိုငျး အဟာရ သုတသေီမြားက ဗီတာမငျစီ အလှနျကွှယျဝသောအသီးဟု သတျမှတျထားကွသညျ။ ၎င်းငျးကို အစိမျးအတိုငျး စား လြှငျ သှေးခြုပျလခြေုပျစေ၏ အမြိုးသမီးမြား ရာသီ အခြိနျအခါတှငျ မစားသငျ့ပါ ။
အသညျးအဆီဖုံးသူအတှကျ ဆီးဖွူသီး ဆားရစေိမျ တဈနတေ့ဈလုံးမြှစားပေးပါ အသီး ကို အခွောကျလှနျးပွီး အသား. ငါး တို့နဲ့ ရောခကျြစားလြှငျ ဟငျးနူးစပွေီး အဆီဓာတျကို လြော့နညျးစပေါသညျ။
ရှောကျရှကျကို ပါးပါးညှပျ အသုတျတှငျရောထညျ့စားခွငျး ဟငျးခြို. အတို့အမွုပျ အဖွဈစားသုံးပါ – ရှောကျရညျ ရှောကျရှကျတို့သညျ အသညျးအတှကျ ဓာတျစာဖွဈပွီး အခဉျြဟငျးမြား၌ ရှောကျရညျ ထညျ့ခကျြခွငျး အကငျမြား၌ ရှောကျရညျညှဈစားခွငျးသညျအသညျးအဆီဖုံးခွငျးကို ကာကှယျသညျ။
ရဲယိုရှကျသညျ နူတျကိုမွိနျစပွေီး လပေူကိုနိုငျသောသတ်တိရှိသညျ။ အသညျးတှငျ အပူအောငျးခွငျး အသညျးခွောကျခွငျး ရောဂါအတှကျ ၁ ပတျလြှငျ ရဲယိုရှကျကို ၂ ကွိမျ စားသုံးပေးလြှငျ ကာကှယျရာရောကျသညျ။
ငါးခူ ငါးဖယျ. ငါးကွငျးခွဈနဲ့ ရောခကျြစားခွငျး ဖကျထုပျပွု၍ကွျောစားခွငျး ရနှေေးငှေ့ ဖွဈလညျး ပေါငျးစားပေးနိုငျပါသညျ။
( အဖိုးနညျး ဝနျပါ ) ရိုးရာ ဆေးဖကျဝငျ အပငျ အသီး မြားကို စားသုံးရငျး ရောဂါ မဖွဈခငျ ကာကှယျနိုငျပါသညျ။
ဆောငျးပါးရှငျ ကွညျလှငျမွငျ့ ( မုဒွာ )
အသည်းအဆီဖုံးခြင်းသည် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အဖြစ်များသော ရောဂါဖြစ်၏ .
ယခင် အသည်းရောဂါမှာ အသားဝါ ရိုးရိုးသာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး – ပထမ မျက်စိဝါ နောက်ဆုံး ဆီးဝါပြီး တိုင်းရင်းဆေး အမှတ် ( ၁ ) မက်လင်ချဉ်ဆေး …
( ရှေးဆေးကျမ်းများမှ သေမှပုတိက သလိပ်ပုပ်နိုင်ဆေးနည်းကို ယူထားသောဆေး )ဖြစ်ပြီး အဓိကမှာ ( မက်လင်သီး – မက်လင်ခေါက် ) တို့ဖြစ်သည်။
မက်လင်သီးသည် အလွန်ချဉ်ပြီး ဟင်းချက်ရာတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြသည့် တောဓလေ့ သုံး အသီးဖြစ်သည်။
မက်လင်သီး. မက်လင်ခေါက်တို့သည် အသည်းအတွက်အလွန်ကောင်းပြီး အသည်းရောင်ခြင်း. အသားဝါခြင်း. ဆီးဝါခြင်း တို့ကို အလျှင်အမြန်ကောင်းစေကြောင်း သိရပါသည်။
၁၉၉၅ နောက်ပိုင်းမှသာ ပိုးကြောင့် ဖြစ်သော အသည်းရောဂါ. အသည်းခြောက် အသည်းအဆီဖုံး ရောဂါများ အဖြစ်များလာပြီး သေဆုံးသူများပြားလာ၏ ။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဖက်ဝင် အပင်များသည် –
၁ – တစ်နေ့တခြား ဝဖြိုးလာသူ
၂ – အရက် – ဘီယာ သောက်သုံးလွန်းသူ
၃ – ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီ ဓာတ်များသူ
၄ – အထိုင်များသူ
၅ – လမ်းလျှောက်နည်းသူ
၆ – ဇိမ်ယဇ်လွန်းသော သူများအတွက် – အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ – အသည်းခြောက်ရောဂါများ မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးနိုင်သော သဘာဝ အပင်များ ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်ပါက တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြည့်နိုင်ပါသည်။
ထိုအပင်အား ထမင်း လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ဖြင့် မြေစဉ့်အိုးတွင် ၃ ရက်ခန့် အချဉ်တည်ပြီးဟင်းဂလာချဉ်ဖတ်အဖြစ် ငါးနဲ့ ချက်စားခြင်း ငါးပိရည်နဲ့ တွဲဖက် စားသုံးပါက အရက်နာကျခြင်း , အသည်းခြောက်ခြင်း , အသည်းအဆီဖုံးခြင်းများ မဖြစ်စေပါ။
၄င်း ဟင်းဂလာပင်ကို ပြုတ်သောက်ပါက ဆီးအတွက် အလွန်ကောင်း၏ ကျွဲ. နွားများ.ဆီးချုပ်သောအခါ ထိုအပင်ကို ခုတ်စင်း၍ နွားစာတွင်. ရောကျွေးရသည်။
( ဆောင်းပါးရှင်၏ အဖိုး တစ်ဝမ်းကွဲတော်သူသည် ညနေခင်းတိုင်း ချက်အရက်ဟုခေါ်သော အရက်ဖြူကို ပုံမှန် သောက်ပြီး ဟင်းဂလာချဉ်ကို အမြီးအဖြစ် နေ့စဉ် စားသုံးခဲ့ အသက် ၉၉ နှစ်ကျော် ၁၀၀ အတွင်းရောက်မှ ကွယ်လွန်သည်ဟု သိရပါသည်။
တောဓလေ့တွင် ချက်အရက်သောက်ပြီး အရက်နာ မကျစေရန် ဟင်းဂလာချဉ်ဖတ်ကို ပဲကြီးလှော်နှင့် စားသုံးလေ့ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
အရွက်သေး၏ အရွက်နဲ့အရိုးတွင် အမွှေးနုလေးများပါပြီး ရိုးတံ အနီနဲ့ အဖြူရောင် ၂ မျိုးရှိပြီး ဆေးဖက်ဝင်သည်။ ထိုအပင်ကို နွယ်လိုက်နူတ်ယူ နေရိပ်တွင်လှန်း အပင်ခြောက်သွေ့သွားပါက သံဘူး သို့မဟုတ် ဖန်ပုလင်းတွင် ထည့်ပါ။
နေ့စဉ် မတ်ခွက် တစ်ခွက်စာ လက်ဖက်ခြောက် ခပ်သောက်သလို ခပ်သောက်ပေးပါက အသည်း အဆီဖုံးခြင်းကို ကျဆင်းစေနိုင်ပြီး ဆီးကောင်း ဆီးရွှင်စေကာ မျက်လုံးအား ကောင်းစေသည်။
မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများစွာ၌ ပါဝင်ပြီး အနောက်တိုင်း အဟာရ သုတေသီများက ဗီတာမင်စီ အလွန်ကြွယ်ဝသောအသီးဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ၄င်းကို အစိမ်းအတိုင်း စား လျှင် သွေးချုပ်လေချုပ်စေ၏ အမျိုးသမီးများ ရာသီ အချိန်အခါတွင် မစားသင့်ပါ ။
အသည်းအဆီဖုံးသူအတွက် ဆီးဖြူသီး ဆားရေစိမ် တစ်နေ့တစ်လုံးမျှစားပေးပါ အသီး ကို အခြောက်လှန်းပြီး အသား. ငါး တို့နဲ့ ရောချက်စားလျှင် ဟင်းနူးစေပြီး အဆီဓာတ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။
ရှောက်ရွက်ကို ပါးပါးညှပ် အသုတ်တွင်ရောထည့်စားခြင်း ဟင်းချို. အတို့အမြုပ် အဖြစ်စားသုံးပါ – ရှောက်ရည် ရှောက်ရွက်တို့သည် အသည်းအတွက် ဓာတ်စာဖြစ်ပြီး အချဉ်ဟင်းများ၌ ရှောက်ရည် ထည့်ချက်ခြင်း အကင်များ၌ ရှောက်ရည်ညှစ်စားခြင်းသည်အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကို ကာကွယ်သည်။
ရဲယိုရွက်သည် နူတ်ကိုမြိန်စေပြီး လေပူကိုနိုင်သောသတ္တိရှိသည်။ အသည်းတွင် အပူအောင်းခြင်း အသည်းခြောက်ခြင်း ရောဂါအတွက် ၁ ပတ်လျှင် ရဲယိုရွက်ကို ၂ ကြိမ် စားသုံးပေးလျှင် ကာကွယ်ရာရောက်သည်။
ငါးခူ ငါးဖယ်. ငါးကြင်းခြစ်နဲ့ ရောချက်စားခြင်း ဖက်ထုပ်ပြု၍ကြော်စားခြင်း ရေနွေးငွေ့ ဖြစ်လည်း ပေါင်းစားပေးနိုင်ပါသည်။
( အဖိုးနည်း ဝန်ပါ ) ရိုးရာ ဆေးဖက်ဝင် အပင် အသီး များကို စားသုံးရင်း ရောဂါ မဖြစ်ခင် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါးရှင် ကြည်လွင်မြင့် ( မုဒြာ )
-မွနျမာ့ဆေးဝါးပငျမြား အဘိဓာနျတှငျ ကွောငျလြှာသီးသညျ ဖနျခါးသောအရသာရှိ၍ ပူ၏။ စပျ၏။ ကွလှေယျ၏။ နှုတျကို မွိနျစေ၏။ နှလုံး၊ လညျပငျးကို အကြိုးပွု၏။ ဝမျးမီးကိုတောကျစေ၏။ လသေလိပျကို နိုငျ၏။ မွငျးသရိုကျဝမျးသကျ၊ အဖြား၊ အစာ မကွေ၊ နူနာ၊ ပြို့အနျ၊ ခြောငျးဆိုးရောဂါတို့ကို ပြောကျကငျးစနေိုငျ၍ ခှနျအားကိုတိုးပှားစေ ၏ဟု ဆိုထားပါတယျ။
-ရှုတျောမူဆေးကမျြးတှငျ ကွောငျလြှာသီး အနုသညျ ခါး၏။ ဖနျ၊ ခြို အရသာလညျးရှိ၏။ ဝမျးမီးကိုတောကျစတေတျ၏။ မွငျးသရိုကျ နာ၊ ပိုးနာမြိုးတို့ကိုနိုငျ၏ဟု ဆိုထားပါတယျ။ à သကျစောငျ့ဆေးအဘိဓာနျတှငျ ကွောငျ လြှာသီးသညျ ခြို၊ ဖနျ၊ ခါးရှိ၏။ နှုတျကိုမွိနျစေ ၏။ ကကျြလှယျ၊ ကွလှေယျ၏။ လပေကျြ စေ၏။ ပိုးနာ၊ နားအူနာတို့ကို ခမျြးသာစေ၏ ဟု ဆိုထားပါတယျ။
-ဇီဝိတဝဃုနဆေးကမျြးတှငျ ကွောငျလြှာ သီးသညျ အေး၏၊ ခါး၏၊ အတနျငယျဆိမျ့၏။ လကေိုဖွောငျ့စတေတျ၏။ အိပျပြျောစတေတျ၏။ မီး၌အတနျငယျအုံး၍ လကျသုပျပွုပွီး စားက အထူးသငျ့လြျော၏ဟုဆိုထားပါတယျ။
-သဘာဝဓမ်မအလငျးတှငျ ကွောငျလြှာသီး သညျ အကွောငျးသီတငွိမျးရနျ၊ ဥဏှ တဇေောဓာတျစာ၊ ဥဏှဝါယောဓာတျစာ၊ အရသာခါးဆိမျ့၊ အကြိုးသှားဆီးနညျး၊ ဓာတျခြုပျ၊ လသေကျဟုဆိုထားပါတယျ။
-လကျတှအေ့သုံးခဆြေးဖကျဝငျအပငျမြား ပေါငျးခြုပျတှငျ ကွောငျလြှာသီးသညျ ဆိမျ့၊ ဖနျ၊ ခါးသောအရသာရှိ၏။ အသီးစိမျးသညျ ပူစပျအရသာရှိပွီး အစာကွစေနေိုငျ၏။ လသေလိပျကိုနိုငျ၏။ ပငျစညျသညျ အနညျး ငယျပူခါးစပျပွီး ဒေါသသုံးပါးကိုငွိမျးစေ၏။ နှုတျမမွိနျနာ၊ ပနျးနာ၊ ခြောငျးဆိုး၊ အစာမကွေ ရောဂါ၊ ခံတှငျးခွောကျကှဲနာမြားကို ပြောကျ ကငျးစနေိုငျ၏ဟု ဆိုထားပါတယျ။ကွောငျလြှာသီးနှငျ့ ကနျြးမာရေး အသီး၊ အပှငျ့၊ အမွဈ၊ အခေါကျတို့ကို စားဖှယျ၊သောကျဖှယျ၊ ဆေးသုံးဖှယျအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
– ကွောငျလြှာအခေါကျမှုနျ့ကို ခငျြးရညျ သို့မဟုတျ သဘာဝပြားရညျစဈစဈတို့နှငျ့ ရောစပျ၍သောကျပါက ပနျးနာခြောငျးဆိုး ရောဂါကို ပြောကျစပေါတယျ။
– အခေါကျမှုနျ့ကိုရနှေေးတှငျ နှဈနာရီခနျ့ စိမျ၍စဈပွီး နံနကျ၊ ညသောကျခွငျးဖွငျ့ အစာမကွရေောဂါပြောကျပါတယျ။
– ကွောငျလြှာအခေါကျနှငျ့ အရှကျတို့ကို ရစေိမျ၍ ¤ငျးရဖွေငျ့ ပလုတျကငျြးပေးပါက ခံတှငျးခွောကျကှဲနာပြောကျစပေါတယျ။
– သားဖှားပွီးနာကငျြကိုကျခဲသညျ့ ရောဂါ၊ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျ ရောဂါမြားအတှကျ ကွောငျလြှာခေါကျမှုနျ့တဈဆ၊ ခငျြးခွောကျ မှုနျ့တဈဆ၊ ထနျးလကျြနှဈဆတို့ကိုရော၍ နံနကျ၊ နေ့၊ ည သုံးကွိမျသောကျပါ။
– အခေါကျကို အဆဈအမကျြကိုကျဖြား ရောဂါ၊ ဝမျးဖော၊ ဝမျးရောငျ၊ ဝမျးကိုကျ ရောဂါမြားအတှကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အရှကျ၏အသုံးဝငျပုံ
– ကွောငျလြှာရှကျကိုအရညျညှဈ၍ သောကျ ပါက ဘိနျးအဆိပျကိုပွစေနေိုငျပါတယျ။
– ကွောငျလြှာရှကျကို ပွုတျ၍စားပေးခွငျး ဖွငျ့ အစာအိမျနှငျ့ အူလမျးကွောငျးကို တိုးတကျကောငျးမှနျစပေါတယျ။
– ကွောငျလြှာပှငျ့ကိုသုပျစားခွငျး၊ ရနှေေး ဖွောပွီး မွှုပျတို့စားခွငျးဖွငျ့ နှုတျကိုမွိနျစပွေီး အစာစားခငျြစိတျကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ နားလေးခွငျး၊ နားလထှေကျခွငျး၊ နားအူခွငျး တို့ကို သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။ ဝမျးကိုကျရောဂါကိုလညျး ပြောကျကငျးစပေါ တယျ။
– အသီးကိုပွုတျ၍လညျးကောငျး၊ ဖုတျ၍ လညျးကောငျး စားခွငျးဖွငျ့အစာမကွရေောဂါ၊ လညျပငျးကွီးရောဂါ၊ လသေလိပျရောဂါ၊ လထေိုးလအေောငျ့ရောဂါနှငျ့ မွငျးသရိုကျ ရောဂါ ပြောကျစပေါတယျ။ သုပျစားခွငျးဖွငျ့ လညျခြောငျးတှငျး အပူဖုပေါကျသောရောဂါ ပြောကျစပေါတယျ။
– ကွကျသားနှငျ့ခကျြစားပါက ပနျးနာရောဂါ ပြောကျစပေါတယျ။
– ငါးရံ့ဖွငျ့ခကျြစားပါက ကာလဝမျးရောဂါ ပြောကျစပေါတယျ။ အားဖွဈစပွေီး အစာ မကွရေောဂါ၊ ဝမျးပကျြရောဂါပြောကျစပေါ တယျ။
– ပုစှနျဖွငျ့ခကျြစားပါက နှလုံးလရေိုကျ ရောဂါ၊ နှလုံးတုနျ၊ ရငျတုနျရောဂါ ပြောကျစေ ပါတယျ။
– ငါးသလောကျဖွငျ့ခကျြစားပါက အဖော ရောဂါကိုကစြေ၍ လူကိုဝဖွိုးစပွေီး နှလုံး အားနညျးခွငျးကို သကျသာပြောကျကငျးစေ ပါတယျ။
– ငါးမွှထေိုးနှငျ့ခကျြစားပါက ဒူလာ သှေးဝမျး၊ မီးယပျသှေးဝမျးနှငျ့ မွငျးသရိုကျ ရောဂါတို့ကို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
– နားပငျးသူမြား ကွောငျလြှာသီးကို သံပရာ ရညျနှငျ့ သုပျစားပါ။
– ကွောငျလြှာသီး၏ ခါးသောအရသာက ခန်ဓာကိုယျထဲမှအဆီပိုတှကေို ခဖြေကျြပေး ရုံတငျမက ဆီးခြိုသှေးခြိုမဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
– မှိုအရပွေားရောဂါမဖွဈအောငျ ခါးသကျ သကျအရသာရှိသော ကွောငျလြှာသီးကို ပို၍စားပေးပါ။
– ကွောငျလြှာသီးကဲ့သို့ ခါးသောအသီးအနှံ တှကေ ရာသီဖြားဖွဈသော အအေးမိ၊ တုပျကှေး စတဲ့ပွငျပရောဂါပိုးမြား ကူးစကျ ခွငျးမှ ကာကှယျပေးနိုငျပါ တယျ။
– ရှေးတိုငျးရငျးသမားတျောမြားက နားလေ ထှကျ၊ နားအူခွငျးအတှကျ ကွောငျလြှာသီးနုကိုညှဈပွီး ရလာသောအရညျကို ကွေးဇှနျးတှငျထညျ့၍ ပူနှေးအောငျပွုလုပျကာနားတှငျခတျပေးခွငျး၊ ကပျြပေးခွငျးပွုလုပျ၍ကုသခဲ့ကွပါတယျ။
– အမွဈကိုသှေး၍လိမျးခွငျးဖွငျ့ အနာဝငျ မနျးလိုကျခွငျးကိုပြောကျကငျးစပေါတယျ။
– လဖွေတျ၍ တဈခွမျးသေ၊ တဈပိုငျးသေ၊ ထုံကဉျြနာ၊ ခညျြ့နဲ့သောသူမြား ကွောငျလြှာ ပငျ၏အမွဈခေါကျကို သှေးလိမျးပေးပါ။
-ဖောရောငျခွငျးအတှကျ အမွဈခေါကျကို သှေးလိမျးပေးပါက သကျသာပြောကျကငျး စပေါတယျ။
– နားတှငျအနာဖွဈပါက ကွောငျလြှာအမွဈ မှုနျ့ကို နှမျးဆီနှငျ့မီးတှငျခကျြပွီး ၄ငျးအရညျ ခပျနှေးနှေးကို နားကပျြပေးပါ။ နားရောဂါမြား ပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။
လိုအပျသညျ့အမယျမြားကတော့ ကွောငျလြှာသီး၊ ဆား၊ ဟငျးခတျမှုနျ့၊ ဆီ၊ ငံပွာရညျ၊ ကွကျသှနျနီ၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ ပုစှနျခွောကျမှုနျ့၊ မွပေဲ၊ သံပရာရညျတို့ လိုအပျပါမယျ။
ပထမဆုံး ကွကျသှနျဖွူကို အခှံနှာပွီး ဆီခကျြ ခကျြထားပါ။ ပွီးလြှငျကွကျသှနျနီကို အခှံနှာပွီး ပါးပါးလှီးပွီး ရဆေေးပွီး ရစေဈထားပါ။ မွပေဲလှျောပွီးသားကို ထောငျးထားပါ။
ပွီးနောကျ ကွောငျလြှာသီးကို ရဆေေးပွီးပါးပါးလှီးကာ ဆားနှငျ့ အလယျအဆံထှကျသညျအထိနယျပွီး ရနှေဈကွိမျလောကျဆေးပွီး ရညှေဈထားပါ။
ပွီးလြှငျ ရညှေဈထားသော ကွောငျလြှာသီးကို ပါးပါးလှီးထားသော ကွကျသှနျနီ၊ ဆီခကျြ၊ မွပေဲလှျောထောငျး၊ ပုစှနျခွောကျမှုနျ့၊ ဆား၊ ဟငျးခတျမှုနျ့၊ ငံပွာရညျနှငျ့ သံပရာရညျတို့ညှဈထညျ့ပွီး သမအောငျနယျပေးပါ။
ငရုတျသီးမှုနျ့ကို နောကျဆုံးမှထညျ့ပွီးလြှငျ အရသာရှိသော ကွောငျလြှာသီးသုပျကို အသငျ့သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
-မြန်မာ့ဆေးဝါးပင်များ အဘိဓာန်တွင် ကြောင်လျှာသီးသည် ဖန်ခါးသောအရသာရှိ၍ ပူ၏။ စပ်၏။ ကြေလွယ်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ နှလုံး၊ လည်ပင်းကို အကျိုးပြု၏။ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။ လေသလိပ်ကို နိုင်၏။ မြင်းသရိုက်ဝမ်းသက်၊ အဖျား၊ အစာ မကြေ၊ နူနာ၊ ပျို့အန်၊ ချောင်းဆိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၍ ခွန်အားကိုတိုးပွားစေ ၏ဟု ဆိုထားပါတယ်။
-ရှုတော်မူဆေးကျမ်းတွင် ကြောင်လျှာသီး အနုသည် ခါး၏။ ဖန်၊ ချို အရသာလည်းရှိ၏။ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေတတ်၏။ မြင်းသရိုက် နာ၊ ပိုးနာမျိုးတို့ကိုနိုင်၏ဟု ဆိုထားပါတယ်။ à သက်စောင့်ဆေးအဘိဓာန်တွင် ကြောင် လျှာသီးသည် ချို၊ ဖန်၊ ခါးရှိ၏။ နှုတ်ကိုမြိန်စေ ၏။ ကျက်လွယ်၊ ကြေလွယ်၏။ လေပျက် စေ၏။ ပိုးနာ၊ နားအူနာတို့ကို ချမ်းသာစေ၏ ဟု ဆိုထားပါတယ်။
-ဇီဝိတဝဃုနဆေးကျမ်းတွင် ကြောင်လျှာ သီးသည် အေး၏၊ ခါး၏၊ အတန်ငယ်ဆိမ့်၏။ လေကိုဖြောင့်စေတတ်၏။ အိပ်ပျော်စေတတ်၏။ မီး၌အတန်ငယ်အုံး၍ လက်သုပ်ပြုပြီး စားက အထူးသင့်လျော်၏ဟုဆိုထားပါတယ်။
-သဘာဝဓမ္မအလင်းတွင် ကြောင်လျှာသီး သည် အကြောင်းသီတငြိမ်းရန်၊ ဥဏှ တေဇောဓာတ်စာ၊ ဥဏှဝါယောဓာတ်စာ၊ အရသာခါးဆိမ့်၊ အကျိုးသွားဆီးနည်း၊ ဓာတ်ချုပ်၊ လေသက်ဟုဆိုထားပါတယ်။
-လက်တွေ့အသုံးချဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပေါင်းချုပ်တွင် ကြောင်လျှာသီးသည် ဆိမ့်၊ ဖန်၊ ခါးသောအရသာရှိ၏။ အသီးစိမ်းသည် ပူစပ်အရသာရှိပြီး အစာကြေစေနိုင်၏။ လေသလိပ်ကိုနိုင်၏။ ပင်စည်သည် အနည်း ငယ်ပူခါးစပ်ပြီး ဒေါသသုံးပါးကိုငြိမ်းစေ၏။ နှုတ်မမြိန်နာ၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ အစာမကြေ ရောဂါ၊ ခံတွင်းခြောက်ကွဲနာများကို ပျောက် ကင်းစေနိုင်၏ဟု ဆိုထားပါတယ်။ကြောင်လျှာသီးနှင့် ကျန်းမာရေး အသီး၊ အပွင့်၊ အမြစ်၊ အခေါက်တို့ကို စားဖွယ်၊သောက်ဖွယ်၊ ဆေးသုံးဖွယ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
– ကြောင်လျှာအခေါက်မှုန့်ကို ချင်းရည် သို့မဟုတ် သဘာဝပျားရည်စစ်စစ်တို့နှင့် ရောစပ်၍သောက်ပါက ပန်းနာချောင်းဆိုး ရောဂါကို ပျောက်စေပါတယ်။
– အခေါက်မှုန့်ကိုရေနွေးတွင် နှစ်နာရီခန့် စိမ်၍စစ်ပြီး နံနက်၊ ညသောက်ခြင်းဖြင့် အစာမကြေရောဂါပျောက်ပါတယ်။
– ကြောင်လျှာအခေါက်နှင့် အရွက်တို့ကို ရေစိမ်၍ ¤င်းရေဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပေးပါက ခံတွင်းခြောက်ကွဲနာပျောက်စေပါတယ်။
– သားဖွားပြီးနာကျင်ကိုက်ခဲသည့် ရောဂါ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ရောဂါများအတွက် ကြောင်လျှာခေါက်မှုန့်တစ်ဆ၊ ချင်းခြောက် မှုန့်တစ်ဆ၊ ထန်းလျက်နှစ်ဆတို့ကိုရော၍ နံနက်၊ နေ့၊ ည သုံးကြိမ်သောက်ပါ။
– အခေါက်ကို အဆစ်အမျက်ကိုက်ဖျား ရောဂါ၊ ဝမ်းဖော၊ ဝမ်းရောင်၊ ဝမ်းကိုက် ရောဂါများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရွက်၏အသုံးဝင်ပုံ
– ကြောင်လျှာရွက်ကိုအရည်ညှစ်၍ သောက် ပါက ဘိန်းအဆိပ်ကိုပြေစေနိုင်ပါတယ်။
– ကြောင်လျှာရွက်ကို ပြုတ်၍စားပေးခြင်း ဖြင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
– ကြောင်လျှာပွင့်ကိုသုပ်စားခြင်း၊ ရေနွေး ဖြောပြီး မြှုပ်တို့စားခြင်းဖြင့် နှုတ်ကိုမြိန်စေပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ နားလေးခြင်း၊ နားလေထွက်ခြင်း၊ နားအူခြင်း တို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါ တယ်။
– အသီးကိုပြုတ်၍လည်းကောင်း၊ ဖုတ်၍ လည်းကောင်း စားခြင်းဖြင့်အစာမကြေရောဂါ၊ လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ လေသလိပ်ရောဂါ၊ လေထိုးလေအောင့်ရောဂါနှင့် မြင်းသရိုက် ရောဂါ ပျောက်စေပါတယ်။ သုပ်စားခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းတွင်း အပူဖုပေါက်သောရောဂါ ပျောက်စေပါတယ်။
– ကြက်သားနှင့်ချက်စားပါက ပန်းနာရောဂါ ပျောက်စေပါတယ်။
– ငါးရံ့ဖြင့်ချက်စားပါက ကာလဝမ်းရောဂါ ပျောက်စေပါတယ်။ အားဖြစ်စေပြီး အစာ မကြေရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ရောဂါပျောက်စေပါ တယ်။
– ပုစွန်ဖြင့်ချက်စားပါက နှလုံးလေရိုက် ရောဂါ၊ နှလုံးတုန်၊ ရင်တုန်ရောဂါ ပျောက်စေ ပါတယ်။
– ငါးသလောက်ဖြင့်ချက်စားပါက အဖော ရောဂါကိုကျစေ၍ လူကိုဝဖြိုးစေပြီး နှလုံး အားနည်းခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေ ပါတယ်။
– ငါးမြွေထိုးနှင့်ချက်စားပါက ဒူလာ သွေးဝမ်း၊ မီးယပ်သွေးဝမ်းနှင့် မြင်းသရိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
– နားပင်းသူများ ကြောင်လျှာသီးကို သံပရာ ရည်နှင့် သုပ်စားပါ။
– ကြောင်လျှာသီး၏ ခါးသောအရသာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှအဆီပိုတွေကို ချေဖျက်ပေး ရုံတင်မက ဆီးချိုသွေးချိုမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
– မှိုအရေပြားရောဂါမဖြစ်အောင် ခါးသက် သက်အရသာရှိသော ကြောင်လျှာသီးကို ပို၍စားပေးပါ။
– ကြောင်လျှာသီးကဲ့သို့ ခါးသောအသီးအနှံ တွေက ရာသီဖျားဖြစ်သော အအေးမိ၊ တုပ်ကွေး စတဲ့ပြင်ပရောဂါပိုးများ ကူးစက် ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။
– ရှေးတိုင်းရင်းသမားတော်များက နားလေ ထွက်၊ နားအူခြင်းအတွက် ကြောင်လျှာသီးနုကိုညှစ်ပြီး ရလာသောအရည်ကို ကြေးဇွန်းတွင်ထည့်၍ ပူနွေးအောင်ပြုလုပ်ကာနားတွင်ခတ်ပေးခြင်း၊ ကျပ်ပေးခြင်းပြုလုပ်၍ကုသခဲ့ကြပါတယ်။
– အမြစ်ကိုသွေး၍လိမ်းခြင်းဖြင့် အနာဝင် မန်းလိုက်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
– လေဖြတ်၍ တစ်ခြမ်းသေ၊ တစ်ပိုင်းသေ၊ ထုံကျဉ်နာ၊ ချည့်နဲ့သောသူများ ကြောင်လျှာ ပင်၏အမြစ်ခေါက်ကို သွေးလိမ်းပေးပါ။
-ဖောရောင်ခြင်းအတွက် အမြစ်ခေါက်ကို သွေးလိမ်းပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်း စေပါတယ်။
– နားတွင်အနာဖြစ်ပါက ကြောင်လျှာအမြစ် မှုန့်ကို နှမ်းဆီနှင့်မီးတွင်ချက်ပြီး ၄င်းအရည် ခပ်နွေးနွေးကို နားကျပ်ပေးပါ။ နားရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်သည့်အမယ်များကတော့ ကြောင်လျှာသီး၊ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ဆီ၊ ငံပြာရည်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ မြေပဲ၊ သံပရာရည်တို့ လိုအပ်ပါမယ်။
ပထမဆုံး ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံနွှာပြီး ဆီချက် ချက်ထားပါ။ ပြီးလျှင်ကြက်သွန်နီကို အခွံနွှာပြီး ပါးပါးလှီးပြီး ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ။ မြေပဲလှော်ပြီးသားကို ထောင်းထားပါ။
ပြီးနောက် ကြောင်လျှာသီးကို ရေဆေးပြီးပါးပါးလှီးကာ ဆားနှင့် အလယ်အဆံထွက်သည်အထိနယ်ပြီး ရေနှစ်ကြိမ်လောက်ဆေးပြီး ရေညှစ်ထားပါ။
ပြီးလျှင် ရေညှစ်ထားသော ကြောင်လျှာသီးကို ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ၊ ဆီချက်၊ မြေပဲလှော်ထောင်း၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ငံပြာရည်နှင့် သံပရာရည်တို့ညှစ်ထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပေးပါ။
ငရုတ်သီးမှုန့်ကို နောက်ဆုံးမှထည့်ပြီးလျှင် အရသာရှိသော ကြောင်လျှာသီးသုပ်ကို အသင့်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ပဲသီးစားပေးခွငျးရဲ့ အံ့အားသငျ့ဖှယျရာ ကနျြးမာရေးကောငျးကြိုးမြား
ပဲသီးတှမှော ဗီတာမငျအစုံအလငျပါဝငျတဲ့အပွငျ ဖောလဈအကျစဈနှငျ့ နှလုံးကိုကာကှယျပေးတဲ့ ကယျလျစီယမျနှငျ့ ဖိုကျဘာတို့လညျး ပါဝငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီလိုမြိုး ပဲသီးတှကေိုစားပေးခွငျးက ဘယျလိုမြိုးကနျြးမာရေးကောငျးကြိုးတှကေို ဖွဈစနေိုငျသလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့အတှကျ ယခုပဲဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
ဒေါကျခှရှကျတှနေဲ့ယှဉျလြှငျ ပဲသီးတှကေ သံဓာတျပါဝငျမှုနှဈဆရှိလို့ သှေးနီဥတှကေိုပိုမိုထုတျလှတျပေးပွီး ခန်ဓာကိုယျတလြှောကျရှိ အဆုတျတှမှေ ဆဲလျတှအေထိ အောကျဆီဂငျြရရှိစပေါတယျ။ အားအငျတှကေုနျခမျးနပွေီး သှေးအားနညျးနတေယျဆိုရငျ ပဲသီးတှကေ သငျလိုနတေဲ့အရာတှပေါပဲ။
၂။ အသားအရေ၊ဆံကသောနှငျ့ လကျသညျးခွသေညျးမြားအတှကျ
ဒီအာဟာရအပွညျ့နဲ့ ပဲသီးတှကေ အသားအရေ၊ဆံပငျနှငျ့ လကျသညျးခွသေညျးတှအေတှကျပါ ကောငျးကြိုးတှပေေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ တဈသြှူးတှဖှေဲ့စညျးမှုကို ကနျြးမာစပွေီး လကျသညျးခွသေညျးတှကေို သနျမာစကော အသားအရကေိုလညျး နုပြိုလှပစပေါတယျ။
ပဲသီးတှငျပါဝငျတဲ့ Vitamin K က အရိုးအတှငျးက ကယျလျစီယမျမျောလီကြူးတှကေို ဆကျနှယျပေးပွီး သနျမာမှုကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
Carotenoids ကွှယျဝတဲ့ ပဲသီးတှဟော မကျြစိအာရုံကောငျးစမှေုကို အထောကျအကူဖွဈစတေဲ့ Lutein နှငျ့ Zeaxanthin တို့လညျး အထူးကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ မကျြစိအားကိုကောငျးစပွေီး အခွားကနျြးမာရေးပွဿနာတှဖွေဈပျေါခွငျးမှလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
ပဲသီးစားပေးခြင်းရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
ပဲသီးတွေမှာ ဗီတာမင်အစုံအလင်ပါဝင်တဲ့အပြင် ဖောလစ်အက်စစ်နှင့် နှလုံးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဖိုက်ဘာတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး ပဲသီးတွေကိုစားပေးခြင်းက ဘယ်လိုမျိုးကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်သလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့အတွက် ယခုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဒေါက်ခွရွက်တွေနဲ့ယှဉ်လျှင် ပဲသီးတွေက သံဓာတ်ပါဝင်မှုနှစ်ဆရှိလို့ သွေးနီဥတွေကိုပိုမိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်တလျှောက်ရှိ အဆုတ်တွေမှ ဆဲလ်တွေအထိ အောက်ဆီဂျင်ရရှိစေပါတယ်။ အားအင်တွေကုန်ခမ်းနေပြီး သွေးအားနည်းနေတယ်ဆိုရင် ပဲသီးတွေက သင်လိုနေတဲ့အရာတွေပါပဲ။
၂။ အသားအရေ၊ဆံကေသာနှင့် လက်သည်းခြေသည်းများအတွက်
ဒီအာဟာရအပြည့်နဲ့ ပဲသီးတွေက အသားအရေ၊ဆံပင်နှင့် လက်သည်းခြေသည်းတွေအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးတွေပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်သျှူးတွေဖွဲ့စည်းမှုကို ကျန်းမာစေပြီး လက်သည်းခြေသည်းတွေကို သန်မာစေကာ အသားအရေကိုလည်း နုပျိုလှပစေပါတယ်။
ပဲသီးတွင်ပါဝင်တဲ့ Vitamin K က အရိုးအတွင်းက ကယ်လ်စီယမ်မော်လီကျူးတွေကို ဆက်နွှယ်ပေးပြီး သန်မာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
Carotenoids ကြွယ်ဝတဲ့ ပဲသီးတွေဟာ မျက်စိအာရုံကောင်းစေမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ Lutein နှင့် Zeaxanthin တို့လည်း အထူးကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မျက်စိအားကိုကောင်းစေပြီး အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ခေါငျး မှာ သနျးမြားရှိလြှငျ
ဦးခေါငျး သနျးမြားရှိခွငျး အတှကျ
တောကွကျဟငျးခါးအစခွေ့ောကျကိုအမှုနျ့ပွုပွီးအုနျးဆီနှငျ့ ဆံပငျမြားကွား နှံ့နှံ့သခွောဖိပှတျ၍လူးပေးပါ ။
ညနလေူးညသိပျနောကျတနမေ့နကျခေါငျးလြှျောပေးပါ ဦးခေါငျးသနျးမြား ကငျးရှငျးသှားပါလိမျ့မညျ ။
( အထကျပါအတိုငျး တောကွကျဟငျးခါးအရငျ့အစခွေ့ောကျ အဆငျမပွလြှေငျ ” တမာသီး၏အစခွေ့ောကျအမှုနျ့ဖွငျ့ပွုပါပေးပါ )
လကျတှေ့ဦးခေါငျးသနျး ပြောကျကငျးစသေောနညျးပါ ။
ဆေးနညျးပေးသော တိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီး အဘဦးတငျထှေးအားဦးခိုကျပါသညျ ။
ဦးခေါင်း သန်းများရှိခြင်း အတွက်
တောကြက်ဟင်းခါးအစေ့ခြောက်ကိုအမှုန့်ပြုပြီးအုန်းဆီနှင့်် ဆံပင်များကြား နှံ့နှံ့သေခြာဖိပွတ်၍လူးပေးပါ ။
ညနေလူးညသိပ်နောက်တနေ့မနက်ခေါင်းလျှော်ပေးပါ ဦးခေါင်းသန်းများ ကင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မည် ။
( အထက်ပါအတိုင်း တောကြက်ဟင်းခါးအရင့်အစေ့ခြောက် အဆင်မပြေလျှင် ” တမာသီး၏အစေ့ခြောက်အမှုန့်ဖြင့်ပြုပါပေးပါ )
လက်တွေ့ဦးခေါင်းသန်း ပျောက်ကင်းစေသောနည်းပါ ။
ဆေးနည်းပေးသော တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး အဘဦးတင်ထွေးအားဦးခိုက်ပါသည် ။
ကဲ ခုခြိနျ​ကသရကျ​သီး​ပေါတဲ့ ရာသီဆို​တော့ သရကျ​သီးရဲ့ အကြိုးအာနိသငျ​လေး​တှေ​ဖျော​ပွ​ပေးလိုကျ​ပါတယျေ​နျာ​
January 17, 2021 May 18, 2020 by Zaw Hein
`အသီးမှာ သရကျ(King of fruits)´လို့ ဆိုးရိုးစကား ရှိပါတယျ။ ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှာ သရကျသီး မြိုးစိတျပေါငျးမြားစှာ ရှငျသနျပေါကျရောကျပွီး လူမြိုးစုမြားစှာကလညျး သရကျသီးကို မွိနျရရှေကျရေ စားသုံးကွပါ တယျ။ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ စိနျတလုံး၊ မခဈြစု၊ ရှဟေင်ျသာ၊အောငျဒငျ၊နတျတဲ့၊ သုံးလုံးတဈတောငျ အစရှိတဲ့ သရကျသီး မြိုးစိတျပေါငျးမြားစှာ ရှငျသနျပေါကျရောကျ ပါတယျ။
သရကျသီးမှညျ့မှာ ဘီတာမငျ အမြိုးနှဈဆယျကြျောနှငျ့ သတ်တုဓာတျမြား၊ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြဒွပျပေါငျးမြား၊ အမြှငျဓာတျနှငျ့ ရဓောတျမြားစှာပါဝငျလို့ သရကျသီးမှညျ့ကို စားသုံးခွငျးအားဖွငျ့ အောကျပါ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေး ဇူးတှေ ရရှိနိုငျပါတယျ။
၁။ အမွငျအာရုံပကျြစီးခွငျးမှ ကာကှယျပေးခွငျး
သဘာဝအရ အသကျကွီးလာနဲ့အမြှ လူ့ခန်ဓာကိုယျက ပကျြစီးယိုယှငျးလာပါတယျ။ ပကျြစီးယိုယှငျးလာတဲ့ အထဲမှာ မွငျလှာ(မကျြလုံးအိမျအနောကျဘကျရှိ အမွှေးပါး) လညျး ပါပါတယျ။သရကျသီးမှာ ပါတဲ့ Zeaxanthin ဆို တဲ့ ဒွပျပေါငျးက မွငျလှာကို ခရမျးလှနျရောငျခွညျမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။ သရကျသီးမှာ ဘီတာမငျအေ Vit A အမြားအပွား ပါဝငျပါသေးတယျ။ သရကျသီးကို ပုံမှနျစားသုံးခွငျးအားဖွငျ့ အမွငျအာရုံ ပကျြစီးယိုယှငျးတာ၊ ကွကျမကျြသငျ့ရောဂါနဲ့ မကျြကွညျလှာခွောကျသှပေ့ကျြစီးတာတှကေနေ ကာကှယျပေးပါတယျ။
သရကျသီးမှာ Betacarotene မြားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ ပနျးနာရငျကွပျရောဂါ သညျတှသော Betacarotene ဓာတျပါတဲ့ အစားအစာတှေ နစေ့ဉျစားသုံးရငျ ရငျကွပျရောဂါဖွဈပှားနှုနျး လြော့ကနြိုငျတယျလို့ ဆေးပညာရှငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
၃။ အရိုးကို သနျမာစေ
ဘီတာမငျကေ ဓာတျခြို့တဲ့သူတှနေဲ့ အရိုးကြိုးလှယျတာက မြားစှာဆကျစပျ နပေါတယျ။ သရကျသီးမှာ ဘီတာမငျကေ မြားစှာ ပါဝငျလို့ အရိုးကို သနျမာစပေါတယျ။ ဘီတာမငျကကေ ကယျဆီယမျ စုပျယူမှုကို အားပေးပါတယျ။
၄။ မှတျဥာဏျကောငျးပွီး အာရုံစူးစိုကျမှုရစေ
သရကျသီးမှာပါတဲ့ ပရိုတငျးတဈမြိုး (Glutamin acid)ကွောငျ့ ဦးနှောကျနဲ့အာရုံကွောကို အားတိုးစပွေီး မှတျဥာဏျကောငျးကာ အာရုံစူးစိုကျမှု မွငျ့မားစပေါတယျ။
ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးပါတဲ့ သဈသီးဝလံအားလုံးက ကငျဆာဖွဈပှားမှုကို လြော့ခနြိုငျပါတယျ။ သရကျသီးမှာပါတဲ့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးမြား( Antioxidant_Gallic acid, Fisetin, quercetin, isoquercitrin, astragalin, methylgallat)ကွောငျ့ ဆီးကွိတျကငျဆာ၊ ရငျသားကငျဆာ၊အူလမျးကွောငျးကငျ ဆာ၊ သှေးကငျဆာ ဖွဈပှားနှုနျးတှေ လြော့ကစြနေိုငျတယျလို့ Harvard school of Public Health`s Department of Nutrition ရဲ့လလေ့ာမှုအရ သိရပါတယျ။
၆။ သရကျသီး အနညျးငယျစားသုံးခွငျးက ဆီးခြိုထိနျးညှိပေးနိုငျ
သရကျသီးမှညျ့ကို ဆီးခြိုသမားတှေ စားလို့ ရ မရ ကို ဆေးပညာရှငျတှေ ငွငျးခုနျနကွေဆဲပါပဲ။ တဈနေ့ သရကျသီး မှညျ့ တဈလုံး၊ နှဈလုံး စားခွငျးက သှေးထဲက အငျဆူလငျနဲ့ သကွားဓာတျကို သဟဇာတ ဖွဈစပေါတယျ။ ဆီးခြိုပမာဏ ထိနျးထားနိုငျရငျ စားလို့ရပါတယျ။တနျဆေးလှနျဘေးဆိုသလို ဆီးခြိုသမားမြားက သရကျသီးကို အလှနျအကြှံ မစားရပါဘူး။ဆီးခြိုတကျနခြေိနျ မစားသငျ့ပါ။
သရကျသီးမှညျ့မှာပါဝငျတဲ့ အမြှငျဓာတျ(fibers)နဲ့ ရဓောတျတှကေ အစာအိမျအူလမျးကွောငျးလှုပျရှားမှုကို အားပေးပွီး ၀မျးခြုပျခွငျးမှာ ကာကှယျတားဆီးပေးပါတယျ။ အစာအိမျအူလမျးကွောငျး လှုပျရှားဖို့ ကယျလိုရီ မြားစှာ အသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျ အလေးခြိနျကို လြော့ခနြိုငျပါတယျ။
၉။ နှရောသီရဲ့အပူကို သရကျသီးဖြျောရညျနဲ့ အနျတုပါ။
နှရောသီရဲ့ ပူပွငျးမှုကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျက ရဓောတျမြားစှာ ဆုံးရှုံးပွီး Heat stroke ရကာ အသကျသဆေုံးတဲ့ အထိ ဖွဈတတျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ အပူခြိနျ မလှနျစဖေို့ သရကျသီးဖြျောရညျက သငျ့ကို ကူညီနိုငျပါတယျ။ သရကျသီး၊ပြားရညျနဲ့ ရကေို ရောဖြျောကာ သောကျသုံးခွငျးအားဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အပူခြိနျကို ထိနျးညှိပေးပါလိမျ့မယျ။
၁၀။ စိုပွညျဝါဝငျးပွီး ၀ကျခွံကငျးတဲ့မကျြနှာ
သရကျသီးကို စားသုံးခွငျးအားဖွငျ့ အသားရကေို စိုပွညျစပေါတယျ။ သရကျသီးကို အစိတျငယျလေးတှေ လှီးကာ မကျြနှာပျေါ ပေါငျးတငျနိုငျပါတယျ။ ၁၅မိနဈခနျ့ မကျြနှာပျေါတငျပွီး မကျြနှာသဈပါ။ မကျြနှာပျေါက ခြှေးပေါကျကို ကဉျြးစပွေီး ၀ကျခွံထှကျခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။
သရကျသီးမှာပါတဲ့ Vit C,collagen တှကေ ဆံကသောကို ခှနျအားပေးပွီး နကျမှောငျ သနျစှမျးကာ နူးညံ့ပြော့ပြောငျး စပေါတယျ။
၁၂။ အမြိုးသားမြားအတှကျ သတငျးကောငျး
သရကျသီးကို အနောကျနိုငျငံတခြို့မှာ Love fruitလို့ တငျစားချေါဝျေါကွပါတယျ။ သရကျသီးမှာပါတဲ့ ဒွပျပေါငျးတှကေ လငျနဲ့မယားကွား ကာမစိတျဆန်ဒဖွဈပျေါမှုကို အားပေးပွီး အမြိုးသားမြားကိုလညျး အမွငျ့ဆုံးသော ကာမစှမျးဆောငျမှုကို ရရှိစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သရကျသီးမှာပါတဲ့ ဘီတာမငျအမြိုး၂၀ကြျောနဲ့ သတ်တုဓာတျတှကွေောငျ့ ကိုယျခံအားကို မွငျ့မားစပွေီး ရောဂါ မြိုးစုံဝငျရောကျခွငျးမှ ကာကှယျတားဆီး ပေးပါတယျ။
သရကျသီးမှာပါတဲ့ သံဓာတျကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးမြား၊ သှေးဆုံးပွီး အမြိုးသမီးမြားနဲ့ သှေး အားနညျးရောဂါသညျတှကေ သရကျသီးကို ပုံမှနျစားသုံးသငျ့ ပါတယျ။ သှေးအားပွညျ့ဝနရေငျ သငျ့ရဲ့ နှုတျခမျးလေး က ပနျးနုရောငျလေးပွေးနမှော အသခြောပါ။
သရကျသီး ပုံမှနျစားသုံးရငျ ဆီးကြောကျတညျခွငျးမှ ကငျးဝေးတယျလို့ တရုတျဆေးပညာရှငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
၁၆။ ငှကေုနျသကျသာစှာ အိမျမှာပဲ ပေါငျးတငျပါ
သရကျသီး၊ ပြားရညျ၊ နို့တှရေောကွိတျပွီး ခန်ဓာကိုယျအနှံ့ ပေါငျးတငျနိုငျပါတယျ။ ငှကေုနျကွေးကြ သကျသာ စှာ မိမိအိမျမှာပဲ ပေါငျးတငျ နိုငျပါတယျ။
တနျဆေးလှနျဘေးဆိုသလို သရကျသီးမှညျ့တှကေို အလှနျအကြှံ စားသုံးရငျ
၃။ယငျနားထားတဲ့သရကျသီး၊မသနျ့ရှငျးသောလကျနဲ့ကိုငျထားတဲ့ သရကျသီးတှစေားမိရငျ ၀မျးလြှောခွငျးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
၄။ရမေဆေးဘဲစားရငျ သရကျသီးအစေး ပူလောငျပွီး ပါးစပျတဈဝိုကျမှာ အရပွေား ရောငျရမျးနာ ရတတျပါတယျ။
၅။ သရကျသီးနဲ့ ဓာတျ မတညျ့ခွငျးကို လူအနညျးငယျမှာ ရှားရှားပါးပါး တှရေ့တတျပါတယျ။ ဓာတျမတညျ့သော လက်ခဏာမြား ခြှေးစေးပွနျလာခွငျး။ အသကျရှူနှုနျး နှလုံးခုနျနှုနျးမွနျလာခွငျး။ ဗိုကျအောငျ့လာခွငျး။ သတိလဈမမွေ့ောခွငျး။
အထကျပါကောငျးကြိုးမြားနဲ့ ဆိုးကြိုး အနညျးငယျကို မှတျသားကာ နှရောသီရဲ့ အပူခြိနျကို သရကျသီး စားသုံးပွီး အနျတုဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
`အသီးမှာ သရက်(King of fruits)´လို့ ဆိုးရိုးစကား ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားမှာ သရက်သီး မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်ပြီး လူမျိုးစုများစွာကလည်း သရက်သီးကို မြိန်ရေရှက်ရေ စားသုံးကြပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိန်တလုံး၊ မချစ်စု၊ ရွှေဟင်္သာ၊အောင်ဒင်၊နတ်တဲ့၊ သုံးလုံးတစ်တောင် အစရှိတဲ့ သရက်သီး မျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာ ရှင်သန်ပေါက်ရောက် ပါတယ်။
သရက်သီးမှည့်မှာ ဘီတာမင် အမျိုးနှစ်ဆယ်ကျော်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဒြပ်ပေါင်းများ၊ အမျှင်ဓာတ်နှင့် ရေဓာတ်များစွာပါဝင်လို့ သရက်သီးမှည့်ကို စားသုံးခြင်းအားဖြင့် အောက်ပါ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေး ဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁။ အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
သဘာဝအရ အသက်ကြီးလာနဲ့အမျှ လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ပျက်စီးယိုယွင်းလာပါတယ်။ ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့ အထဲမှာ မြင်လွှာ(မျက်လုံးအိမ်အနောက်ဘက်ရှိ အမြှေးပါး) လည်း ပါပါတယ်။သရက်သီးမှာ ပါတဲ့ Zeaxanthin ဆို တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းက မြင်လွှာကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သရက်သီးမှာ ဘီတာမင်အေ Vit A အများအပြား ပါဝင်ပါသေးတယ်။ သရက်သီးကို ပုံမှန်စားသုံးခြင်းအားဖြင့် အမြင်အာရုံ ပျက်စီးယိုယွင်းတာ၊ ကြက်မျက်သင့်ရောဂါနဲ့ မျက်ကြည်လွှာခြောက်သွေ့ပျက်စီးတာတွေကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သရက်သီးမှာ Betacarotene များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ သည်တွေသာ Betacarotene ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ နေ့စဉ်စားသုံးရင် ရင်ကြပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း လျော့ကျနိုင်တယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
၃။ အရိုးကို သန်မာစေ
ဘီတာမင်ကေ ဓာတ်ချို့တဲ့သူတွေနဲ့ အရိုးကျိုးလွယ်တာက များစွာဆက်စပ် နေပါတယ်။ သရက်သီးမှာ ဘီတာမင်ကေ များစွာ ပါဝင်လို့ အရိုးကို သန်မာစေပါတယ်။ ဘီတာမင်ကေက ကယ်ဆီယမ် စုပ်ယူမှုကို အားပေးပါတယ်။
၄။ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုရစေ
သရက်သီးမှာပါတဲ့ ပရိုတင်းတစ်မျိုး (Glutamin acid)ကြောင့် ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောကို အားတိုးစေပြီး မှတ်ဥာဏ်ကောင်းကာ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားစေပါတယ်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းပါတဲ့ သစ်သီးဝလံအားလုံးက ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ သရက်သီးမှာပါတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ( Antioxidant_Gallic acid, Fisetin, quercetin, isoquercitrin, astragalin, methylgallat)ကြောင့် ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊အူလမ်းကြောင်းကင် ဆာ၊ သွေးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်းတွေ လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ Harvard school of Public Health`s Department of Nutrition ရဲ့လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။
၆။ သရက်သီး အနည်းငယ်စားသုံးခြင်းက ဆီးချိုထိန်းညှိပေးနိုင်
သရက်သီးမှည့်ကို ဆီးချိုသမားတွေ စားလို့ ရ မရ ကို ဆေးပညာရှင်တွေ ငြင်းခုန်နေကြဆဲပါပဲ။ တစ်နေ့ သရက်သီး မှည့် တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး စားခြင်းက သွေးထဲက အင်ဆူလင်နဲ့ သကြားဓာတ်ကို သဟဇာတ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဆီးချိုပမာဏ ထိန်းထားနိုင်ရင် စားလို့ရပါတယ်။တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလို ဆီးချိုသမားများက သရက်သီးကို အလွန်အကျွံ မစားရပါဘူး။ဆီးချိုတက်နေချိန် မစားသင့်ပါ။
သရက်သီးမှည့်မှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်(fibers)နဲ့ ရေဓာတ်တွေက အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကို အားပေးပြီး ၀မ်းချုပ်ခြင်းမှာ ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်။ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားဖို့ ကယ်လိုရီ များစွာ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။
၉။ နွေရာသီရဲ့အပူကို သရက်သီးဖျော်ရည်နဲ့ အန်တုပါ။
နွေရာသီရဲ့ ပူပြင်းမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်များစွာ ဆုံးရှုံးပြီး Heat stroke ရကာ အသက်သေဆုံးတဲ့ အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် မလွန်စေဖို့ သရက်သီးဖျော်ရည်က သင့်ကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သရက်သီး၊ပျားရည်နဲ့ ရေကို ရောဖျော်ကာ သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ စိုပြည်ဝါဝင်းပြီး ၀က်ခြံကင်းတဲ့မျက်နှာ
သရက်သီးကို စားသုံးခြင်းအားဖြင့် အသားရေကို စိုပြည်စေပါတယ်။ သရက်သီးကို အစိတ်ငယ်လေးတွေ လှီးကာ မျက်နှာပေါ် ပေါင်းတင်နိုင်ပါတယ်။ ၁၅မိနစ်ခန့် မျက်နှာပေါ်တင်ပြီး မျက်နှာသစ်ပါ။ မျက်နှာပေါ်က ချွေးပေါက်ကို ကျဉ်းစေပြီး ၀က်ခြံထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သရက်သီးမှာပါတဲ့ Vit C,collagen တွေက ဆံကေသာကို ခွန်အားပေးပြီး နက်မှောင် သန်စွမ်းကာ နူးညံ့ပျော့ပျောင်း စေပါတယ်။
၁၂။ အမျိုးသားများအတွက် သတင်းကောင်း
သရက်သီးကို အနောက်နိုင်ငံတချို့မှာ Love fruitလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ သရက်သီးမှာပါတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက လင်နဲ့မယားကြား ကာမစိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း အမြင့်ဆုံးသော ကာမစွမ်းဆောင်မှုကို ရရှိစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သရက်သီးမှာပါတဲ့ ဘီတာမင်အမျိုး၂၀ကျော်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကြောင့် ကိုယ်ခံအားကို မြင့်မားစေပြီး ရောဂါ မျိုးစုံဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီး ပေးပါတယ်။
သရက်သီးမှာပါတဲ့ သံဓာတ်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၊ သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးများနဲ့ သွေး အားနည်းရောဂါသည်တွေက သရက်သီးကို ပုံမှန်စားသုံးသင့် ပါတယ်။ သွေးအားပြည့်ဝနေရင် သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး က ပန်းနုရောင်လေးပြေးနေမှာ အသေချာပါ။
သရက်သီး ပုံမှန်စားသုံးရင် ဆီးကျောက်တည်ခြင်းမှ ကင်းဝေးတယ်လို့ တရုတ်ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
၁၆။ ငွေကုန်သက်သာစွာ အိမ်မှာပဲ ပေါင်းတင်ပါ
သရက်သီး၊ ပျားရည်၊ နို့တွေရောကြိတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပေါင်းတင်နိုင်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာ စွာ မိမိအိမ်မှာပဲ ပေါင်းတင် နိုင်ပါတယ်။
တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလို သရက်သီးမှည့်တွေကို အလွန်အကျွံ စားသုံးရင်
၃။ယင်နားထားတဲ့သရက်သီး၊မသန့်ရှင်းသောလက်နဲ့ကိုင်ထားတဲ့ သရက်သီးတွေစားမိရင် ၀မ်းလျှောခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ရေမဆေးဘဲစားရင် သရက်သီးအစေး ပူလောင်ပြီး ပါးစပ်တစ်ဝိုက်မှာ အရေပြား ရောင်ရမ်းနာ ရတတ်ပါတယ်။
၅။ သရက်သီးနဲ့ ဓာတ် မတည့်ခြင်းကို လူအနည်းငယ်မှာ ရှားရှားပါးပါး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်သော လက္ခဏာများ ချွေးစေးပြန်လာခြင်း။ အသက်ရှူနှုန်း နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာခြင်း။ ဗိုက်အောင့်လာခြင်း။ သတိလစ်မေ့မြောခြင်း။
အထက်ပါကောင်းကျိုးများနဲ့ ဆိုးကျိုး အနည်းငယ်ကို မှတ်သားကာ နွေရာသီရဲ့ အပူချိန်ကို သရက်သီး စားသုံးပြီး အန်တုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
January 1, 2021 May 18, 2020 by Zaw Hein
လေးနာရီပနျး– မဉ်ဇူ ပနျး
မွနျမာ ဆေးကမျြးမြား အလိုအရ မဉ်ဇူပနျး ပငျ၏ အရှကျသညျ ခါး၏ ၊ အဖုအနာ ကို ပြောကျကငျး စေ၏ ၊ ကာမကို အားပေး၏ ၊ အပူကို နညျးပါး စသေညျ။
၁ ။ ဥကို ပနျးသေ ၊ ပနျးညှိုးရောဂါ အတှကျ ဆေးဖျောစပျ ရာတှငျလညျး ထညျ့သှငျး အသုံးပွု ၏ ။
၂ ။ မဉ်ဇူပနျးဥ ၊ ခငျြးခွောကျ ၊ ငရုတျကောငျး ၊ ပိတျခငျြး သီး တို့ကို အမှုနျ့ ပွု၍ ပြားရညျနှငျ့ လကျြသျော ညောငျးကြ ရောဂါ ပြောကျ၏။
၁ ။ မဉ်ဇူ ရှကျစိမျး ကွိတျရညျ ညှဈရညျနှငျ့ လိမျးပေးသျော အရေ ပွား ပျေါ တှငျ ယားဖု ကလေးမြား ပေါကျ၍ မနနေိုငျ အောငျ ယားယံခွငျး ပြောကျ၏။
၂ ။ အရိုးကြိုး ခွငျး ၊ အဆဈလှဲ ခွငျး ၊ အကွောထုံး ဖှဲ့ခွငျး မြားအတှကျ အရှကျကို ရအေေးနှငျ့ ကွိတျ၍ အုံပေး ခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျး စနေိုငျသညျ။
၁ ။ အပငျ ၏ ပဉ်စငါးပါးကို သကွားနှငျ့ သုံးခှကျ တဈခှကျ တငျ ကြို သောကျလြှငျ ဆီးပူ ၊ ဆီးကိုကျ ၊ ဆီးကငျြ ၊ ဆီးပိတျ ၊ ဆီးကြောကျ တညျသော ရောဂါ ပြောကျ၏ ။
Credit to — IVU Plant Lover’s
လေးနာရီပန်း– မဉ္ဇူ ပန်း
မြန်မာ ဆေးကျမ်းများ အလိုအရ မဉ္ဇူပန်း ပင်၏ အရွက်သည် ခါး၏ ၊ အဖုအနာ ကို ပျောက်ကင်း စေ၏ ၊ ကာမကို အားပေး၏ ၊ အပူကို နည်းပါး စေသည်။
၁ ။ ဥကို ပန်းသေ ၊ ပန်းညှိုးရောဂါ အတွက် ဆေးဖော်စပ် ရာတွင်လည်း ထည့်သွင်း အသုံးပြု ၏ ။
၂ ။ မဉ္ဇူပန်းဥ ၊ ချင်းခြောက် ၊ ငရုတ်ကောင်း ၊ ပိတ်ချင်း သီး တို့ကို အမှုန့် ပြု၍ ပျားရည်နှင့် လျက်သော် ညောင်းကျ ရောဂါ ပျောက်၏။
၁ ။ မဉ္ဇူ ရွက်စိမ်း ကြိတ်ရည် ညှစ်ရည်နှင့် လိမ်းပေးသော် အရေ ပြား ပေါ် တွင် ယားဖု ကလေးများ ပေါက်၍ မနေနိုင် အောင် ယားယံခြင်း ပျောက်၏။
၂ ။ အရိုးကျိုး ခြင်း ၊ အဆစ်လွှဲ ခြင်း ၊ အကြောထုံး ဖွဲ့ခြင်း များအတွက် အရွက်ကို ရေအေးနှင့် ကြိတ်၍ အုံပေး ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။
၁ ။ အပင် ၏ ပဉ္စငါးပါးကို သကြားနှင့် သုံးခွက် တစ်ခွက် တင် ကျို သောက်လျှင် ဆီးပူ ၊ ဆီးကိုက် ၊ ဆီးကျင် ၊ ဆီးပိတ် ၊ ဆီးကျောက် တည်သော ရောဂါ ပျောက်၏ ။
သှေးလှနျတုပျကှေးကိုကုသပေးမဲ့ သင်ျဘောရှကျသင်ျဘောရှကျက ဘာလို့ သှေးလှနျတုပျကှေးကို ပြောကျကငျးစတောလဲ
တကယျကိုမေးသငျ့တဲ့မေးခှနျးပါပဲ။ သင်ျဘောရှကျမှာ Papain နဲ့ Chymopapin စတဲ့ အစှမျးထကျ အငျဇိုငျးတှပေါဝငျပါတယျ။ Platelet လို့ချေါတဲ့ သှေးမှာဆဲလျတှကေို တိုးလာစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဗီတာမငျ၊ ကာဗှနျဟိုကျဒရိတျ၊ ပရိုတငျး၊ ကယျလျဆီယမျ၊ သံဓါတျ နဲ့ ဖော့ဈဖိုးရပျ စတဲ့ဂုဏျသတ်တိတှပေါဝငျနပေါတယျ။သှေးလှနျတုပျကှေးပြောကျကငျးစမေဲ့သင်ျဘငေ်္ာရှကျဖြျောရညျပွုလုပျနညျးပါဝငျပစ်စညျးသဘောင်ျရှကျအစိမျး ၂ ရှကျပွုလုပျနညျး
သဘောင်ျရှကျရဲ့ အညှာတှကေိုဖယျပွီး အရှကျကိုသာ သုံးရမှာပါ။ သင်ျဘောရှကျကို သခြောရဆေေးပွီး ညှကျအောငျထောငျးကာ အရညျထှကျလာအောငျ ညဈထုတျပါ။
အဲဒီအရညျကို ဒီအတိုငျးသောကျသုံးပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈနကေို့ ၂ ကွိမျလောကျသောကျပေးရမှာဖွဈပွီး သကျသာလာတာကို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။
နောကျတဈနညျးသင်ျဘောရှကျဖြျောရညျအကွမျးလိုပဲ သင်ျဘောရှကျကို ညှကျအောငျထောငျးပေးပွီး ဖြျောသောကျလို့ရပါတယျ။ပါဝငျပစ်စညျး
သင်ျဘောရှကျအစိမျး ၃ ရှကျအသီးဖြျောရညျ (မိမိကွိုကျနှဈသကျရာ) စားပှဲတငျဇှနျး ၂ ဇှနျးပွုလုပျနညျး
လတျဆတျတဲ့ သဘောင်ျရှကျတှကေိုယူပွီး ကွိတျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အသီးဖြျောရညျနဲ့ သခြောသမအောငျရောပေးပါ။
ရောပွီးရငျ သောကျသုံးနိုငျပါပွီ။ တဈနေ့ ၂ ကွိမျနဲ့ ၇ ရကျလောကျသောကျပေးပါ။ သကျသာလာပါလိမျ့မယျ။
သွေးလွန်တုပ်ကွေးကိုကုသပေးမဲ့ သင်္ဘောရွက်သင်္ဘောရွက်က ဘာလို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကို ပျောက်ကင်းစေတာလဲ
တကယ်ကိုမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ သင်္ဘောရွက်မှာ Papain နဲ့ Chymopapin စတဲ့ အစွမ်းထက် အင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Platelet လို့ခေါ်တဲ့ သွေးမွှာဆဲလ်တွေကို တိုးလာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်၊ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓါတ် နဲ့ ဖော့စ်ဖိုးရပ် စတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်နေပါတယ်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးပျောက်ကင်းစေမဲ့သင်္ဘေင်္ာရွက်ဖျော်ရည်ပြုလုပ်နည်းပါဝင်ပစ္စည်းသဘောင်္ရွက်အစိမ်း ၂ ရွက်ပြုလုပ်နည်း
သဘောင်္ရွက်ရဲ့ အညှာတွေကိုဖယ်ပြီး အရွက်ကိုသာ သုံးရမှာပါ။ သင်္ဘောရွက်ကို သေချာရေဆေးပြီး ညှက်အောင်ထောင်းကာ အရည်ထွက်လာအောင် ညစ်ထုတ်ပါ။
အဲဒီအရည်ကို ဒီအတိုင်းသောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်လောက်သောက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး သက်သာလာတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သင်္ဘောရွက်ဖျော်ရည်အကြမ်းလိုပဲ သင်္ဘောရွက်ကို ညှက်အောင်ထောင်းပေးပြီး ဖျော်သောက်လို့ရပါတယ်။
သင်္ဘောရွက်အစိမ်း ၃ ရွက်အသီးဖျော်ရည် (မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ) စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းပြုလုပ်နည်း
လတ်ဆတ်တဲ့ သဘောင်္ရွက်တွေကိုယူပြီး ကြိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အသီးဖျော်ရည်နဲ့ သေချာသမအောင်ရောပေးပါ။
ရောပြီးရင် သောက်သုံးနိုင်ပါပြီ။ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်နဲ့ ၇ ရက်လောက်သောက်ပေးပါ။ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။